Alasora - Wikipedia
18°57′20″S 47°34′03″E﻿ / ﻿18.955460°S 47.567430°E﻿ / -18.955460; 47.567430
Isam-ponina 23 094 mponina
Alasora dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'Antananarivo Avaradrano, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 23094 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10201 ary ny kaodin-distrika dia 102.
Renivohi-panjakan’ Andriamanelo (taonjato faha-16) i Alasora. Teo Ambohitrandriananahary, ampita avaratra antsinanan' Alasora no nanorim-bohitra i Andriamananitany izay natao hanjaka handimby an’ Andriamanelo rahalahiny. Teo Ambohibe, toerana avaratr’ i Alasora no napetrak’ Andriamanelo i Andriandranandobe zaodahiny. Ary i Ralambo zanak’ Andriamanelo dia nandao an’ i Alasora koa nianavaratra nankeo Ambohidrabiby. Araka izany, ny faritra avaratr’ i Alasora no nitoeran’ireo andriana telo avo razana indrindra tamin’ny fanjakan’ Andriamanelo.
Ny anjaran'ny tantsaha mampiasa zezika simika dia 50-75%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia chou-fleur. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia legioma hafa. Ny isan'omby dia 74. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia chou-fleur. Ny entana lafo vidy indrindra dia poarô. 80 isan-jaton'ny tanimbary no voatondraka amin'ny tohidrano na paompy. 3 ny mponina no manao asa tanana. 40 ny mponina no miasa tany. 10 ny mponina no miasa amin'ny fiompiana. 47 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha. 100 no isan'ny kisoa.
Ahitana tobim-pahasalamana ao. Ijanon'ny taksiborosy ilay kaominina. Ahitana orinasa mampiasa olona mihoatra ny 50. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona 10 hatramin'ny 50. Ahitana orinasa mampiasa olona latsaky ny folo. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Ny JIRAMA no manome ny rano. Misy biraom-paositra ao.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara lehibe. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 1 ora. Ahitana lalana godorô ao amin'ny kaominina. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 1 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 1000 Fmg. Misy fikambanan'ny mpampiasa lalan-tany ao. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 1000 Fmg.
5 isan-jaton'ny mponina no tena mahantra dia mahantra. 15 isan-jaton'ny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavan'ny vanim-potoana mety ahalanian'ny vokatry ny taon-dasa dia 3 volana. 20 isan-jaton'ny mponina no atao hoe manan-karena. 60 isan-jaton'ny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Ny isan'ny vono olona tanatin'ny taona 1999-2001 dia 1. Ny isan'ny vakitrano tanatin'ny taona 1999-2001 dia 10. Ahitana zandary ao amin'ilay kaominina. 1 no isan'ireo mpamono olona tratra tanatin'ny taona 1999-2001.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Alasora&oldid=1002471"
Voaova farany tamin'ny 10 Martsa 2021 amin'ny 17:25 ity pejy ity.